Maodzanyemba neSouth Korea kubatana: Kudya muPyongyang nhasi kunogona kuita nhanho hombe
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Maodzanyemba neSouth Korea kubatana: Kudya muPyongyang nhasi kunogona kuita nhanho hombe
Kuputsa Kufamba Nhau • dzidzo • Hurumende Nhau • North Korea Kuputsa Nhau • South Korea Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Zvakatanga nemitambo pamwe nekushanya apo maKorea maviri paakaedza kutaurirana nekushandira pamwe. Nhasi izuva renhoroondo mukuita kwekubatana pakati pevaKorea vaviri vakakamurwa. Inenge isingatariswe nenhamba dzinoverengeka dzenhau dzepasirese mutungamiri weSouth Korea
Zvakatanga nemitambo pamwe nekushanya apo maKorea maviri paakaedza kutaurirana nekushandira pamwe. Nhasi izuva renhoroondo mukubatana kwemauto maviri akaparadzaniswa maKorea, uye nhau idzi dzakapotsa dzakatariswa nenhamba dzinoverengeka dzenhau dzepasirese.
Ndege yemutungamiri weSouth Korea, Moon Jae-in, iine nhume dzinamazana maviri, yakasiya Seongnam Air Base na200: 8 mangwanani kuti vabhururuke nzira isingamire kuburikidza neWest Sea. Ndege yakagadzirirwa kusvika kuPyongyang kuma 55 am kana 10 pm EST.
Pyongyang ndiro guta guru reNorth Korea uye rinozivikanwa zvakare seDPRK (Democratic People's Republic of Korea). Uyu ndiwo musangano wechitatu pakati peKorea nemutungamiri weNorth Korea, Kim Jong-un.
Kuti unzwisise kukosha kwechiitiko ichi, munhu anongofanirwa kutarisa kumashure pane zvakaitika pakati peFederal Republic yeGerman neGerman Democratic Republic. Kune zvakawanda zvakafanana zviri kuitika muKorea, zvichiita nhasi zuva rakakosha.
Mune izvo zvinoita kunge zvine chiremera-chikamu chinyorwa mu Rodong Sinmun munaGunyana 15, Pyongyang akasimbisa zvakanyanya kuzvipira kwayo kuhukama hutsva neUS uye nekuita denuclearization. Kanda sekushoropodza "vezvematongerwo enyika vanochengetedza veUS," chinyorwa ichi chinogona kuverengerwa sekurwiswa kwevapikisi mukati meNorth. Pasina kupokana sezvazviri kuitirwa, chinyorwa chinopa Kim Jong-un imwe nzvimbo yekufambisa mukubata neUS uye neSouth Korea, kunyanya mumusangano uri kuuya neMutungamiriri weROK Moon Jae-in.
Nhau dzinodzorwa neNorth Korea nhepfenyuro dzakashuma kuti: “Mutungamiriri wedu anoremekedzwa uye anodikanwa paakasangana nenhume dzakakosha dzekuSouth Korea nguva yadarika, akataura zvakajeka zvakare kuti ndiko kutsunga kwedu uye kuda kwake kubvisa zvachose njodzi yekurwisana nezvombo kutya hondo kubva kuKorea Peninsula uye kuita kuti nyika iyi ive nerunyararo isina zvombo zvenyukireya kana kutyisidzira kwenyukireya. ”
Mumwe mushumo mazuva mashoma apfuura wakati: "Hukama hweDPRK neUS hwatobvisa tsika dzakashata uye kufungira zvisizvo zvekare ndokupinda munzira itsva yenhoroondo. Aya mazwi akafanana nemabhuru akadzingwa nerukova rune simba rwerwizi rukuru rwusingaite kuti vanhu venyika mbiri dzeNorth Korea neUnited States vatadze kuita zvavanofanira kuita kana kuita kuti simba rekusimudzira hukama riite simba nekuisa kunze kwekunyora nekukweva makumbo eshure. ”
Kuseri kwechiitiko, maitiro ekuzivana nekuita shanduko dzinogona kushandura geopolitics epasi rose ari kuitika pamberi peveruzhinji pasirese.
Nhumwa dzeSouth Korea dzakatungamirwa neMutungamiri Moon dzinosanganisira vanhu mazana maviri kubva kumatunhu ese, kubva kune vezvemabhizinesi kusvika kuvaimbi. Vanotarisirwa kumhara kuPyongyang panguva yekutsikisa ichi chinyorwa.
Vatungamiriri vevaKorea vaviri vachanakirwa nechikafu chemanheru uye votanga hurukuro yemusangano mushure mezvo.
"Kutanga kubvisa mukana wekupokana kwakabatana, uye kutya kwehondo," akadaro Moon pamusangano weMuvhuro nevabatsiri vake vakuru.
“Chechipiri chiri kufambisa hurukuro dzekuchamhembe kweUS nedenuclearization. Iyi haisi nyaya yatinogona kutungamira, saka (ini) ndinotarisira kutaura pachena naChairman Kim Jong-un kuti tiwane nzvimbo yepakati pakati pezvinodiwa neUS zvekugadzirisa zvombo zvenyukireya nezvinodiwa neNorth zvekumisa ruvengo nekuona kuchengetedzeka ( yehurumende). ”
Rwendo rwekutanga rweMoon kuPyongyang rwunouya pakati pekusagadzikana muhurukuro dzenyukireya pakati peUS neNorth Korea pamusoro peizvo zvinofanirwa kuuya pekutanga muhurongwa hwedenuclearization. North Korea inoda kuti US ibvume kuzivisa kupera kweHondo yeKorea kutanga, nepo US ichida kuti maNorth atore mamwe matanho ekongiri ekutanga denuclearize.
Mwedzi unoita misangano ingangoita miviri nemutungamiri weNorth Korea muPyongyang. Hurukuro dzavo dzekutanga dzakarongerwa kuitwa munguva pfupi Mwene achisvika muguta guru reNorth Korea, uye hurukuro dzechipiri dzichaitwa Chitatu mangwanani.
Mwedzi wakarongerwa kudzoka kuSeoul neChina.